Global Voices teny Malagasy » Tamil amin’ny Maha-Fiteny sy amin’ny Maha-Vahoaka Azy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Oktobra 2017 7:55 GMT 1	 · Mpanoratra Bharat Nandika Miranah
Sokajy: Azia Atsimo, India, Sri Lanka, Haisoratra, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Inona izany hoe Tamil? Ho an'ny sasany, fiteny izany, ho an'ny hafa, fivavahana izany, ho an'ny tsy mahafantatra mihitsy, wikipedia no famonjena . Misy ihany koa mazava ho azy ny Wikipedia amin'ny teny Tamil .
Ho an'ireo tsy tia mamaky pejy marobe, ahitana ny rehetra ny google current . Manomboka amin'ny hoe “inona izany Tamil” hatramin'ny “ny farany amin'ny sinema Tamil” rehefa miresaka tranonkala momba ny fanambadiana, latsaky ny 3 minitra avokoa izany rehetra izany. Raha mankahala tanteraka ny rohy ivelany ianao, Tamil dia fananglisiavana ny Thamizh”, izay teny taloha be mpampiasa tao India, Sri Lanka ary Singapaoro. Antsoina hoe “Tamil” ireo mpampiasa ny teny.
Manana fitenim-paritra tsy tambo isaina arakaraka ny toerana ampiasana azy ny Tamil. Sanga Thamizh no endrika taloha ary mbola soratana amin'izany endrika izany ny Tamil. Tena hafa ny Tamil tononina am-bava raha oharina amin'ny Tamil soratana. Anisan'ny tena malaza ny “Madras baashai”  izay manana voambolana tsy mitsaha-mitombo satria mindrana teny avy amin'ny teny Anglisy isan'andro isan'andro izy. Ohatra: “Petera” dia midika hoe tovolahy iray mahafehy tsara ny teny Anglisy ary “Maria” no vehivavy mitovy aminy. Mariho fa ny teny hoe “Peter” sy “Maria” dia teny Tamil ao anatin'ity toe-javatra ity. Ahitana lisitra mazava saingy tsy feno ny ao amin'ny Wikipedia . Ny fanampiana ny litera “la” aorian'ny fehezan-tany tsirairay amin'ny tamil “ara-dalàna” dia mahatonga azy ho tamil Singapaoro raha toa kosa ka manana tsindrim-peo tokana ny SriLankey ary ahitana teny sasany tsy hita amin'ny voambolana “Tamil mahazatra” ny andian-tenin'izy ireo
Ny asa soratra amin'ny teny Tamil dia efa hatramin'ny taona 200 talohan'i JK. Iray amin'ireo boky tranainy malaza indrindra nosoratana momba ny fitsipi-pitenenana ny “Tolkaappiyam “. Manana lahatsoratra mahaliana momba ny tantara sy ny asa soratra amin'ny teny tamil kosa i Myle Vaughanan. Asa soratra tsara marihana ny Thiruvasagam, nosoratan'i Manickavasagar teo anelanelan'ny taonjato faha-6 sy faha-11, ary nadikan'i G.U.Pope  ho amin'ny teny Anglisy tamin'ny taonjato faha-20 ary nampiasain'i Ilaiyaraaja tamin'ny mozika tamin'ny taonjato faha-21. Manana lahatsoratra maromaro  momba ny tononkalo maneho herim-po i Priya.
Nampidirina an-tsolosaina efa somary elaela ny fiteny Tamil ary manana ny rafi-teniny manokana antsoina hoe TSCII . Na dia misy olana amin'ny tsy fahafahan'ny rafi-teny sy ny fitaovana OS miaraka aza ny rafitra, hahavonona anao hamaky sy hanoratra votoaty antserasera amin'ny teny tamil ao anatin'ny 10 minitra ny fikarohana momba ny fomba hamahana azy ireo. Gilli milaza aminao  momba ny Firenena Tamil manana lahatsoratra amin'ny antsipiriany bebe kokoa tamin'ny kitendry, endrin-tsoratra sy rindrambaiko tamil. Raha niditra tamin'ny fampiasana ny teny Tamil ny orinasa toa ny Microsoft, sahirana kosa i Nagarajan manoloana ny governemanta Tamil Nadu niova nankany amin'ny open source  ary miresaka momba ny tombontsoa ara-bola amin'izany. Raha mbola mampiasa milina Windows 98 ianao, manana lahatsoratra mikasika ny fomba fampiasàna ny endrin-tsoratra tamil i “erumbugal” . Tsy afaka mitroka ny endrin-tsoratra na mahatsiaro kamo rehefa hiditra amin'ny dingana rehetra? Manana fampiharana an-tserasera hamerina ny tahiry ho anao amin'ny teny tamil i jaffnalibrary  na inona na inona habe (format) anoratanao.
Manana bilaogera tamil marobe i Singapaoro. Manana lahatsoratra maneso mampitaha ny Jiosy sy ny Tamil i Shivaji Das raha miresaka momba ny filàna tsotran'ny tamil.  Endriky ny fiainan'ny tamil any Singapaoro izany. Mitaraina i Thugchic fa teny tsy tena izy ny “Ahpunehneh”  na dia betsaka aza ny mampiasa azy.
Sri Lanka no faharoa ahitana mponina be indrindra mampiasa ny teny Tamil manerana izao tontolo izao. Manoratra ny fomba fijeriny momba ny demaokrasia ao amin'ny faritra atsimon'i kontinanta amin'ity lahatsoratra ity mitondra ny lohateny hoe “Demokarsia- Vinavina vaovao”  ity i Sri Rangan. Miresaka momba ny governemanta Tamil Nadu mametraka ny rafitra SMS Tamil any Sri Lanka  kosa i Samarajiva.
Mihainoa vaovao amin'ny teny Tamil  ao amin'ny BBC amin'ny aterineto .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/10/11/107477/
 wikipedia no famonjena: http://en.wikipedia.org/wiki/Tamil
 Wikipedia amin'ny teny Tamil: http://ta.wikipedia.org
 google current: http://video.google.com/videoplay?docid=4413202459678535244&q=tamil
 “Madras baashai”: http://dreamsofindian.blogspot.com/2006/04/madras-baashai.html
 Ahitana lisitra mazava saingy tsy feno ny ao amin'ny Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Madras_bashai
 tantara sy ny asa soratra amin'ny teny tamil : http://vaughanan.blogspot.com/2005/11/tamil-living-classical-language-my.html
 lahatsoratra maromaro: http://tamilkkalvi.blogspot.com/2005_09_01_tamilkkalvi_archive.html
 Gilli milaza aminao: http://gilli.in/readwrite-in-tamil/
 Firenena Tamil : http://www.tamilnation.org/digital/Tamil%20Fonts%20&%20Software.htm
 niditra tamin'ny fampiasana ny teny Tamil : http://www.bhashaindia.com/Patrons/PatronsHome.htm?lang=ta
 governemanta Tamil Nadu niova nankany amin'ny open source: http://chinthanaigal.blogspot.com/2005/04/will-tamil-nadu-govt-switch-to-linux.html
 manana lahatsoratra mikasika ny fomba fampiasàna ny endrin-tsoratra tamil i : http://www.tamil.net/erumbugal/?cat=11
 filàna tsotran'ny tamil.: http://chutneyspears.blogspot.com/2006/05/simble-needs-of-tamil.html
 teny tsy tena izy ny “Ahpunehneh”: http://frozenqueen.blogspot.com/2006/05/its-about-time.html
 “Demokarsia- Vinavina vaovao”: http://srisagajan.blogspot.com/2006/05/blog-post_114876963254576585.html
 governemanta Tamil Nadu mametraka ny rafitra SMS Tamil any Sri Lanka: http://www.lirneasia.net/2006/05/tamilnadu-adopts-tamil-sms-solution-developed-in-sri-lanka/
 Mihainoa vaovao amin'ny teny Tamil: http://www.bbc.co.uk/tamil/radio/aod/tamil_promo.shtml
 BBC amin'ny aterineto: http://www.bbc.co.uk/tamil/
 ho avin'ny teny Tamil : http://njaanavelvi.blogspot.com/2006/04/20.html
 Liana hianatra ny teny?: http://www.learntamil.com/